ArcGIS-ESRI - Bogga 3 - Geofumadas
... iibinta awoodaha adeegga bilaashka ah ee aadka u dhib badan marka loo eego sarkaal si uu u galo dembi ciqaabeed (budhcad-badeed) sidaa daraadeed ma samayso software qaali ah. Ugu dambeyntii Bentley ayaa bilaabay olole lagu hormarinayo Bentley Map, iyada oo loo adeegsanayo dood, maahan in lagama maarmaan in si gaar ah loo fikiro haddii labada ...
In mid ka mid ah saadaalin aan waalan sanad 2010 this, waxaan sheegay in uu shakiyey ESRI dhicin in la sameeyo version ah la 9.4 magaca, iyo dhab, waxaa la sheegay in version soo socda waxaa loogu yeedhi doonaa ArcGIS 10, oo laga heli karo waxay noqon doontaa semester labaad ee 2010. Meelo badan ayaa leh ...
Tani, taas oo fekerkaygu yahay mid ka mid ah joornaalada ugu wanaagsan ee mawduuca juqraafi ah, waxay xireen 2009 oo leh shandad farsamo leh; in koob ay 7 hayo dib u eegis nidaamka software lacag la'aan ah iyo qalab sahan ee dambe (Exemplary 8 2009 ah) guud isbeddel wayn oo la hogaaminaya dhinaca geospatial ...
Waqtiga qaar waxaan ka hadalnay in ka soo joqraafi aad u dhoofi karto / soo dhoofin kartaa xogta ESRI, abuurista faylasha shp. Laakiin haddii aad haysatid ArcGIS, faahfaahin dheeraad ah oo la xidhiidha wadashaqeyntu waxay leedahay qaabab aad u wanaagsan, aynu eegno: 1. Kicin ballaadhinta. Tani waxaa lagu sameeyaa qalabyada> fidinta iyo halkaan kudhexgalka faahfaahinta Macluumaadka Xiriirinta. Qalabku waa ...
Dhowr maalmood ka hor, kuleylka qaxwaha ka sameysmay hooyadey, waxaan ka dhignay waxyaabo qurux badan oo ku saabsan isbedelka loogu talagalay 2010 aagga internetka. Marka laga hadlayo dhexdhexaadinta deegaan, xaaladdu waa mid heerkulo badan (maaha in la sheego caajis), inta badanna tan ayaa horey loogu sheegay waqtiga dhexdhexaadka ah ...
Waxaan rabaa inaan miiska saaro miiska, khariidada qaabka shp. Miiska waa la bedeli doonaa, markaa ma rabo inaan u beddelo qaabka qaabka ah, mana ku dhejin karo gudaha geodatabase. Jimicsi wanaagsan oo ladoonayo fasaxyada fasaxan iyo dhacdaduna waxay isha ku hayaan ArcGIS 9.3 ka Acer Aspire ...
Saaxiibo qaali ah, waxaan jeclaan lahaa in aan sii daayo gabay ka kacaya nostalgia, laakiin waxay noqon doontaa maalin kale. Hadda ku raaxeysiga fasax oo kharashka yimid, halkan faahfaahin muuqaal ah. Gabadhaydu waxay lahayd baaskiiladeeda ugu horeysay iyada oo aan lahayn jilbaha taageerada ... aniguna halkaan ayaan joogay. Wiilkaygu wuxuu ku qaatay badhkii maalin ...
ArcGIS-ESRI, egeomates My, Leisure / waxyi
Arc Ma jiraan waxyaabo aan caadi ahayn
Laakiin markii ugu horeysay ee aan ku arko waxaan helay fikradda ah in qorshayntaadaadu ay ka baxday heerkaygii, waxaa laga yaabaa in sababta ugu horreysa ay ii muujiyeen inaan si cad uugu hagaajiyey dhadhankaaga; Xitaa waxaan u maleynayay inaan ka soo wareegay maalmahaas. Ka dibna waxaan ku wareeray rgb aasaasiga ah ee ...
Yaa doonaynin in la haysto miiska oo isbarbardhigaya noocyada kala duwan ee barnaamijka GIS oo leh sifooyinka baaritaanka si loo go'aamiyo iibsashada. Maaddaama ay wax u jiraan barta bilowga, oo ay ku jiraan shirkadaha waxtarka leh sida AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, iyo sidoo kale shirkadaha qalabka sida Topcom, Leica iyo ...
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, GPS / Qalabka, GIS kala cayncayn ah, topografia
Waxaan dhif aheyn inaan aragno dalab ku yaalla aagga GIS sida kan uu bixiyay Sinfogeo. Fursadku ma aha oo keliya waxbarashada, laakiin waa dad khaas ah, kuwaas oo la socon kara ardayda internetka oo dhisto buug tababar. Maadaama ay internetka yihiin, waa laga qaadi karaa meel kasta oo adduunka ah, inkasta oo ay sidoo kale heli karaan ...
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, GvSIG, Microstation-Bentley
MapInfo: Shalay, maanta iyo maya berri
MapInfo waa software ah oo si joogta ah loogu soo bandhigay sida tartan tartiib tartiib ah u ah domainka ESRI. Wax badan ayaa la qoray oo ku saabsan qalabkan, waxaan rabaa inaan u diyaargaroobo boostada si aan u sameeyo dib-u-eegis wax-ku-ool ah oo ka badan awoodda, taas oo la raacayo daraasad Dauntch 2008 ah oo ku jirta booska toddobaad ...
ArcView AutoDesk Bentley Systems ESRI GIS kala cayncayn ah egeomates My
Tani waa magaca waraysiga in Eric Van Rees sameeyaa iyadoo raggii madaxda saddex guuto aad u fiican in teknoolajiyada geoinformatics: Jack Dangermond, Madaxweynaha ESRI Richard Zambuni, Director of line geospatial ee Bentley Ton de Vries, Fulinta ee Bentley ee Khadka Madaxa iyo Horumarinta Dhulka Halsey Wise, Madaxweynaha ...
Waa inaad ka dambeysaa tirakoobka Google Analytics si aad u aragto su'aalo cajiib ah ama waqti ku qaadato Yahoo Jawaabaha si aan u lumin dareenka jilicsanaanta. Waxaan jeclaan lahaa in aan ka jawaabo mid kasta oo ka mid ah, laakiin xoojintaydu waa khatar waana ka sii badan tahay haddii tani ay tahay boostada qorshaysan ee Wordpress iyo Live Writer inta aan ahay ...
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Leisure / waxyi
Diyaarinta gabadhayda dhakhtarka ilkaha, oo waxaan ku qaataa fasax dheer oo aan ka tago qaar ka mid ah xiriirada xiisaha leh. Kuwa ugu horeeya waa laba geofumadas xiiso leh oo aan kugula talin lahaa inaad si taxadar leh u daawato, ka dibna waxyaabaha qaar ka mid ah kuwa raadinaya akhris caafimaad leh habeenkii jimcaha. Blom, Visual Intelligence: Pictometry waa wax soo jiidasho leh ...
Bentley Systems blog ESRI Google Earth KML egeomates My
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley, egeomates My
Ku beddel shp to kml ... iyo qiiqa oo dhan
Fdo2Fdo waa codsi xiiso leh oo u adeega ma aha oo kaliya in lagu badalo feylalaha faylka qaabka illaa qaabka kml, maadaama uu booska ku habboon yahay. Waxay noqotaa hadda hadda ka dib dhimashada shp2kml in sida waafaqsan shuruucda abuurkiisa, sida muuqata uu dhacay. Inaad aragto farsamoyaqaannada waa la yaabay ...
Dad badan oo badan ayaa isku raacay in kuwa ugu wanaagsan ee la helay maalmihii ugu dambeeyay ay ahayd wargeyska oo ku saabsan dhacdada, taas oo ka dhigan shaqo weyn oo kaliya maaha kaliya maaddooyinka laakiin dhadhanka muuqaalka. Kuwa loogu talagalay qaabka daabacan, waxay hubaal tahay inay ka dhigan tahay qayb muhiim ah oo ururin ah sida buugaagta joornaalada ay yihiin ...
Isbarbardhigga ArcGIS iyo Manifold GIS
Waa shaqo kaliya titanic ah in user Manifold loo magacaabo Tomasfa ayaa sameeyey oo ciddii u soo gudbisay golaha qalabkan. Wuxuu i xasuusinayaa shaqadaas by Arthur J. Lembo markii uu qabtay shaqo aad u nidaamsan oo ku saabsan sida loo sameeyo ArcGIS iyo Manifold si isku mid ah. Wax ka badan dareenka isbarbardhigga ayaa iigu yeedhay ...
ArcView GPS GIS kala cayncayn ah